कति जनसङ्ख्या छ ? उपमहानगरपालिकासँग छैन जानकारी « Naya Page
बाँके, २७ फागुन । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँग नगर क्षेत्रमा कति घर छन् ? कस्ता छन् ? जनसङ्ख्या कति छ ? ठ्याक्कै तथ्याङ्क छैन । वडा कार्यालयसँग रहेका वर्षौँ पुराना ‘रफ रेकर्ड’लाई आधार बनाएर उपमहानगरपालिकाले मागेको अवस्थामा काम चलाउ तथ्याङ्क दिने गरेको छ ।
घर र जनसङ्ख्याको यकिन तथ्याङ्क नै नराख्ने नगरले के आधारमा उनीहरुलाई सेवा देला ? कसरी विकास गर्ला ? घरैघरले ढाकेको नेपालगञ्जमा कति घर होलान् ? कति मान्छे बस्छन् होला ? यो प्रश्नको जवाफ पाउन करिब मुस्किल रहेको बताउनुहुन्छ नेपालगञ्ज–१९ का प्रदीपकुमार शर्मा । उनले भने, “यसको रेकर्ड कसैसँग छैन, रेकर्ड राख्नुपर्ने उपमहानगरपालिकाले हो, तर राखेको छैन ।”
नेपालगञ्ज–४ का श्याम रावतका अनुसार घर थपिइरहेका छन्, जनसङ्ख्या बढिरहेको छ । तर उपमहानगर बेमतलबी भएर बसिरहेको छ । घर, जनसङ्ख्या थाहा नपाउनु यो कुन हदसम्मको लापरवाही हो ? स्थानीय सरकार बनेको दुई वर्ष बित्यो तर, अझै आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या र घर थाहा नपाउनेले विकास कसरी गरिरहेका होलान् रु आम जानकारमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
विवरणलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत अध्यावधिक गर्दै घरमा नम्बर टाँसेको अवस्थामा कुन घर कुन रोडको कति नम्बरमा पर्छ भन्ने सहजै जानकारी हुनेछ । डिजिटल नम्बरिङपछि बारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स, सुरक्षा व्यवस्थापनका काममा सहज हुने र पाहुनाले समेत गुगलम्यापबाट घर पत्ता लगाउन सक्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास गर्न सबै स्थानीय तहले आवश्यक पहल लिनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।